Soomaaliya Oo Markii Ugu Horeysay Xubin Ka Noqotay Guddiyada Xiriirka K /Kolayga Jaamacadda Carabta
Shir maalmahan uga socday xiriirka kubadda kolayga ee dalalka Jaamacadda carabta magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa waxaa muddo labaatan sanadood ku dhaw ka dib mar kale xubinimada guddiyada xiriirkaasi loogu doortay xubin ka mid ah xiriirka kubadda kolayga Soomaaliyeed.
Xoghayaha xiriirka kubadda kolayga soomaaliyeed Eng Baana Cali (Labaad dhinaca bidix sawirka sare) ayaa loo doortay in uu xubin buuxda ka noqdo guddiga xiriirada iyo doorashooyinka ee xiriirka kubadda kolayga dalalka jaamacadda carabta taasoo ka dambaysay dadaal dheeraad ah oo ay xiriirka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan Eng Baana uu ku mutaystay ka mid noqoshada guddigan waxaana ay taasi guul u tahay xiriirka oo sanadihii ugu dambeeyey muujiyey dadaal dheeraad ah.
Xoghayaha xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Koleyga oo aan kala xariirnay magaalada Qaahira ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay ka mid noqoshada guddigan wuxuuna sidoo kale aad uga faalooday faaiidada ay xubinimadani u leedahay xiriirka soomaaliyeed. "Run ahaantii markii hore waxba kama aanan ogayn dhaqdhaqaaqyada ka socda xiriirkan waxaana dhici jirtay in marmarka qaarkood naloo diido in aan ka qaybgalno cayaaro ay jaamacadda carabtu yeelanayso ayadoo sababo loo samaynayo waxaanse rajaynayaa in aysan taas oo kale dhici doonin hadda wixii ka dambeeya isla markaana aan heli doono warar toos ah" ayuu yiri Eng Baana Cali.
Maxaa kal hore loo siin waayey xubinimadan Soomaaliya ayaan waydiiyey Baana waxa uuna uga jawaabay, "Markii hore waxaa aad u yaraa xiriirka aan la lahayn xiriirada caalamiga ah iyo waliba shirarka aan ka qaybgali jirnay oo yaraa sababaha dagaalada awgood, waxaanan ku qasabnay hadda in ay muhiim tahay xubinimadayada isla markaana aan mudanahay taasoo ay garawsadeen".
Eng Baana oo asagu kulankan u matalayey Soomaaliya ayaa dhinaca kale ka hadlay kulan uu la kulmay guddoomiyaha xiriirka jaamacadda carabta ee kubadda kolayga Talal Bin Badar Bin Saud Bin Abdul Aziz ka dib markii loo doortay xubinimada wuxuuna sheegay in uu xiriirka Soomaaliyeed aad ugu amaanay dadaalka ay ugu jiraan horumarinta kubadda kolayga ayagoo dagaal iyo dhibaato ku jira ayna wax badan ka wanaagsan yihiin dalal nabad ah wuxuuna ugu hambalyeeyey Eng Baana xubinimada loo doortay.
Bahda K/koleyga waxa ay hambalyo u dirayaan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda Koleyga iyo Eng Baana sida ay had iyo jeer ugu dadaalayaan horumarinta kubadda kolayga marka aad ka eegtid dhinacyo badan sida ka qaybgalka cayaaraha caalamiga ah, ka qaybgelinta cayaartoydii iyo macalimiintii hore sare u qaadida kubadda kolayga.
Haddaba haddii aad doonayso in hambalyo aad dirto fadlan noogu hagaaji Emailka shiikha50@hotmail.com
Wixii faallo ka bixin ah (Comments) ku soo hagaaji: info@xiddigaha.ca